အဘယ်အရာကိုပြင်သစ် DAWN, ခန့်မှန်းမိန်းမတွေသူတို့ကြိုက်သလောက် '' အဖြစ်လိင်အခမဲ့နှင့်ယစ်မူး '' နိုင်ပါတယ် - သတင်း
အဘယ်အရာကိုပြင်သစ် Dawn, ခန့်မှန်းမိန်းမတွေသူတို့ကြိုက်သလောက် '' အဖြစ်လိင်အခမဲ့နှင့်ယစ်မူး '' နိုင်ပါတယ်
Dibley ၏ Vicar ၌ကစားခဲ့သော Dawn ပြင်သစ်လူရွှင်တော် Dawn French ကိုသတိရပါသလော။ ကောင်းပြီ၊ Dawn ၏လှပသောပုံရိပ်ကိုသင်သူမ၏နောက်ဆုံးပေါ်ဖတ်လျှင်ချက်ချင်းကွဲသွားလိမ့်မည် Sunday Times မှအင်တာဗျူး သူမသည်ယနေ့ခေတ်အမျိုးသမီးငယ်များကိုခြေထောက်ပေါ်သုက်ပိုးဖြင့်ဖုံးအုပ်။ အိမ်သို့ပြန်သွားသည့် shag စက်များဟုဖော်ပြသည်။
ဤအကြောင်းအရာကိုထည့်သွင်းဖော်ပြရန် Dawn သည် Ibiza ရှိပါတီယဉ်ကျေးမှုအကြောင်းသူမတီဗွီအစီအစဉ်အကြောင်းပြောနေခြင်းဖြစ်သည်။ သူမသည်မိန်းမငယ်များဖြစ်ကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်ရန် mortified ခဲ့သည် တကယ်တော့ အရက်သောက်ခြင်း၊ အတူတူအဆင်သင့်ဖြစ်ခြင်းနှင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်လိင်လွတ်လပ်ခွင့်ရရှိခြင်း။
ဒါပေမယ့်အခြေအနေတွင်ဆီလျှော်သည်။ သူမတီဗွီဇာတ်လမ်းအကြောင်းပြောနေတာလားအရေးမကြီးပါဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိန်းကလေးအများစုဟာညတစ်ညမှာအရက်အလွန်အကျွံသောက်ပြီးမိန်းကလေးတွေဖြစ်ခဲ့ကြလို့ပါ။ မိန်းကလေးအများစုသည်သူမသူငယ်ချင်းများနှင့်အတူညတစ်ညတွင်အဆင်သင့်ရှိနေသည်။ မိန်းကလေးအများစုသည်တစ်ညတာရပ်တည်မှုများရှိသည်။ သူတို့ကနံနက်ခင်းမှာလုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ရပ်အတွက်နောင်တရ၊ မရဖြစ်စေသူတို့အပေါ်မူတည်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အရေးအပါဆုံးကတော့သူတို့လိုချင်တာကိုလုပ်နေတာပါ၊ သူတို့ကောင်းကောင်းလုပ်နေတာပါ။ အဘယ်အရာကိုခန့်မှန်း? သူတို့မှာအကြွင်းမဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နှင့်ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
အရုဏ်ကမရပါဘူး သူမသည်ငယ်ရွယ်သောဗြိတိန်အမျိုးသမီးများထွက်သွားပြီး၎င်းတို့အားခြုံပုတ်၌ရှုပ်ထွေးအောင်ပြုလုပ်နိုင်သည့်ဤအစုလိုက်အပြုံလိုက်ရောဂါကိုဖြစ်စေသည်ဟုမိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်နေသည်။ နှင့်ဤပြproblemနာ, မင်းသမီးနှင့်လူကြီးလူကောင်း, ပုံသူတို့ကိုချစ်, မြတ်နိုးလေးစားခြင်းနှင့်ရိုသေလေးစားလိုသူတစ်စုံတစ် ဦး နှင့်တွေ့ဆုံရန်လိုသောအမျိုးသမီးငယ်များကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ပုံရသည်။
ဒါပေမယ့်တစ်နည်းနည်းနဲ့သူမကျွန်တော် 19 ရာစုအတွင်းနေထိုင်နေမဟုတ်ပါဘူးမေ့လျော့ပုံရသည်။ လူတို့နှင့်မသက်ဆိုင်သော၊ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး၊ သဘောဆန္ဒအလျောက်လိင်ဆက်ဆံလိုသောမိန်းကလေးများသည်၎င်းတို့ကိုချစ်မြတ်နိုးခြင်း၊ တန်ဖိုးထားလေးမြတ်ခြင်းသို့မဟုတ်လေးစားခြင်းရှိမရှိနှင့်လုံးဝဆက်စပ်မှုမရှိပါ။ မိန်းကလေးတိုင်းသည်သူမ၏လိင်မှုဆိုင်ရာသမိုင်းကိုမည်သို့ပင်ကြည့်ပါစေလေးစားသင့်သည်။
သူမမိန်းမများအဘို့မြင်းများ၏ရှေ့မှောက်၌မိမိတို့ကိုယ်ကိုပစ်ချသောအရာကိုရှိမရှိမေးသောကြောင့်, သို့သော်ပိုမိုဆိုးရွားလာတယ်။ ဘာကိုစောင့်ရမှာလဲ? ဒီအင်တာဗျူးတစ်ခုလုံးဟာသရော်စာဖြစ်ခဲ့ရင်တောင်ငါတောင်မှမပြောနိုင်ဘူး။ သို့သော်အချက်မှတပါးပါပဲ။ သူမဤပြwholeနာတစ်ခုလုံးကိုအမ်မလီဒေးဗစ်ဆန်၏အာဇာနည်အဖြစ်နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ကြိုးစားခဲ့သလား။ အမျိုးသမီးလွတ်မြောက်ခြင်းအတွက်တိုက်ပွဲတွင်မြင်းတစ်ကောင်ရှေ့တွင်ခုန်တက်သော suffragette? ငါတို့ဆိုရင် ဖြစ်ကြသည် သူမ၏အကြောင်းပြောနေတာလည်းအမျိုးသမီးများသည်သူတို့၏နေ့စဉ်ဘဝအသက်တာတွင်ရွေးချယ်မှုများပြုလုပ်နိုင်ရန်သူမအသေခံခဲ့သည်ဟူသောအချက်ကိုလည်းဖော်ပြပါစေ။
အရုဏ်ကဤအလွန်လုံး ၀ အဓမ္မပြုကျင့်မှုများ၊ ညဥ့်အခါ၌ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ရှိခြင်းဟုခေါ်သည့်အရာနှင့်လူတို့အားသာလုပ်နိုင်သည့်အရာနှင့်နှိုင်းယှဉ်သည်။ လူ့အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာကျား၊ မရေးရာစံနှုန်းများကိုလိုက်နာခြင်းအပြင်သူမသည်လုံးဝပျောက်ဆုံးသွားပြီးယောက်ျားအားလုံးသည်အတူတူဖြစ်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ သူမသည်သူမကမိန်းကလေးများသည်သူတို့၏အလောင်းများကိုတန်ဖိုးမထားခြင်းကြောင့်၎င်းသည်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသလားဟုမေးသည်။ သင်ကြိုက်သလောက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလွတ်လပ်ခွင့်နှင့်သင်ကြိုက်သလောက်မူးယစ်နေခြင်းသည်တကယ်ပင်အဆင်ပြေပါသလော။ ကျွန်တော်မဝယ်ပါဘူး ငါစိတ်မကောင်းဘူး
ဟုတ်ပါတယ် Dawn, သင်လုံးဝခြေလှမ်းမကျဘူး။ သင်သတိထားမိလျှင်သင်မသိပါ၊ သို့သော်ယနေ့နှင့်ဤခေတ်တွင်သင်ကြိုက်သလောက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလွတ်လပ်မှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းသည်အမှန်ပင် OK ဖြစ်သည်။ မူးရူးသောက်ခြင်းသည်သင်၏ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းသည်၊ သို့မဟုတ်မိန်းကလေးများသည်သူတို့မြင်တွေ့ရသည့်လူတိုင်းနှင့်အတူ ထွက်၍ အိပ်သင့်သည်ဟုပြောနေခြင်းမဟုတ်ပါ။ သို့သော်အချက်ဖြစ်ပါသည် - ကသူတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုပါပဲ။ ကျွန်ုပ်တို့အသက်ရှင်ပြီးသင်ယူကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မိခင်များကကျွန်ုပ်တို့အားမချစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ဤသို့လုပ်နေသည်ဟုပြောရန်အရုဏ်ပြင်သစ်သည်မည်သူနည်း။
အဘယ်သူသည် Jenny နှင့်အတူတက်အဆုံးသတ်ပါဘူး